WARARKA BARAAWEPOST Khamiis 24 january 2013<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Magaalada Marka oo maanta la geeyay ciidan Boolis ah oo ay la socdaan taliyeyaashooda
Sida ay sheegayaan warar aan ka helnay taliska ciidanka Booliska Soomaaliyeed waxaa maanta duhuradii ka ambabaxay magaalada Muqdisho ciidan Boolis ah oo tiradoodu kor u dhaafeyso illaa iyo lixdan askari kuwaasoo loo magacaabay loona baddalay inay ka howlgalaan saldhigga Booliska ee magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeelaha Hoose.
Sidoo kale waxaa ciidankaas loo beddelay maanta inay ka howlgalaan sldhigga booliska ee magaalada Marka weheliya magacaabis la magacaabay taliyaha qeybta Booliiska ee gobolka shabeelada hoose iyo ku xigeenkiisa, iyo weliba taliyaha cusub ee saldhiga magaalada Marka,iyo sidoo kale ku xigeenkiisa iyo dhowr sarkaal oo aqoon fiican uleh dhinaca baarista dembiyada.
Ciidankan maanta loo diray gobolka inay ka howlgalaan magaala xeebeedka caasimadda u ah gobolka Shabeelaha Hoose ee Marka ayaa ahaa kuwo ay u dhan yihin dhamaan saanadooda ciidan iyo gaadiidkii ay ku howlgali lahaayeenba,iyagoo wajigooda laga dheehan karay jawi farxadeed.
Ciidankan ayaa inta aysan ka ambabixin magaalada Muqdisho u soo jeediyay hadalo isugu jira dardaran iyo awaamiir taliyaha ciidanka Booliska Soomaaliyeed S/Gaas Dr Shariif Sheekhuna Maye.
Magaalada marka oo ah magaalo muhiim ahna mid ka mid ah magaalooyinka qadiimiga uguna xadaarada badan dalka Soomaaliya ayaa tan iyo intii maamulkeeda laga faro maroojistay maleeshiyooyinka alshabaab aysan joogin ciidan boolis ah oo si rasmi ah uga howlgala saldhigga Booliska waxayna ciidankan maanta ka ambabaxay magaalada Muqdisho ay noqonayaan ciidankii ugu horeeyay ee Boolis ah ee Taliska ciidanka Booliska federaalka ah ee Soomaaliya uu u magacaabo degmadaas.
Ciidankan ayaa waxaa laga sugayaa inay hantaan dibna u soo celiyaan nabaddii iyo kala dambeyntii ay magaaladaas caanka ku ahayd.
Magaalada Marka ayaa noqonaysa degmadii labaad e eka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose ee dib loo howlgeliyo saldhigeeda Booliska isla markaana la geeyo ciidan boolis ah oo loogu talagalay adkaynta iyo sugidda Amnigaas waxaana magalaada tan ay tahay mid ay nolosha kusoo laabatay si caadi ah marka laga soo tago falal amni darro ah oo mararka qaar ka dhaca.